Waa maxay iyo waa maxay sifaynta biyaha? Faa'iidooyinka iyo qasaaraha | Cusbooneysiinta Cagaaran
Biyaha qasabadda laga cabbo had iyo jeer maahan xulashada ugu fiican. Sababtoo ah biyuhu ma ahan kuwa la cabi karo, way ka fog yihiin, laakiin maxaa yeelay biyaha waxay yeelan karaan cusbo badan sida nuuradda. Kalyahayagu waxay saameyn ku yeelan karaan sanadaha badan nuuraddan dheeriga ah, sidaa darteed, waxaan maanta keenaynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato sifaynta biyaha. Waxaan kuu sheegaynaa dhammaan faa'iidooyinka iyo cilladaha ay leeyihiin qalabkani iyo sida ay u shaqeeyaan.
Marabtaa inaad waxbadan ka ogaato sifaynta biyaha? Sii wad akhriska.
1 Maxay tahay maxaase looga dan leeyahay
3 Khasaaraha ugu weyn
4 Dayactirka iyo rakibida sifeeyaha biyaha
Maxay tahay maxaase looga dan leeyahay
Ma aha oo kaliya cusbada xad dhaafka ah inay biyaha soo galaan, laakiin sidoo kale qaar ka mid ah noolaha iyo bakteeriyada oo sababi kara dhibaatooyinka caafimaadka qaarkood. Wasakhdaas waxaa lagu nadiifin karaa biyo lagu sifeeyo. Waa qalab in ayaa mas'uul ka ah nadiifinta biyaha ka soo baxa tuubada si ay uga nadiif noqdaan wasakhda marka aan u tagno inaan cabno.
In kasta oo biyaha la cabi karo, haddana waxaan u kuurgali karnaa jiritaanka maaddooyin waxyeello leh qaarkood. Waxaas oo dhan waxaa jira sifeeyaha biyaha. Dhammaan waxa aan maanta heli karno waxay leeyihiin teknoolojiyad horumarsan oo ku saleysan adeegsiga miirayaasha miirayaasha kaarboonka firfircoon iyo xuubka kala-goynta qaarkood. Waxa kale oo jira kuwa horumarsan oo isticmaala microfiltration si ay u fuliyaan osmosis. Raggaani waa kuwa ugu casrisan.
Biyaha cabitaanka waxaa lagu jilcin karaa nidaamyadan daahirinta. Guud ahaan, waa in laga takhalusaa inta lagu jiro hawlgalka nidaamka biyaha ee shirkadaha keena, laakiin 100% ka xor ah microbiological-ka saxda ah, kiimikooyinka iyo walxaha jireed markasta lama balan qaadi karo.
Sifeeyahaan waxaa si toos ah loogu dhejiyaa tuubada ama weel jikada ku jira. Sifeeyaashani waxay ka kooban yihiin miirayaal kala duwan oo awood u leh inay nadiifiyaan biyaha sheyga iyo bakteeriyada si looga saaro dhammaan wasakhda ama walaxda aan loo baahnayn. Sidaa darteed aad ayey faa'iido u leedahay in la dhigo meelaha tayada biyuhu xoogaa ka hooseyso. Sidan oo kale waxaan ku hubin doonnaa inaan cabno biyo tayo leh.
Waxaa jira noocyo kala duwan iyadoo loo eegayo kakanaanta. Kuwa ugu dhammeystiran ayaa ah kuwa u baahan rakibaadda guriga oo dhan iyo midka ugu fudud ee miiraha ku xiga tuubada. Labada noocba waxay u adeegaan ujeedo isku mid ah, laakiin heerar kala duwan oo wax ku ool ah.
Faa'iidooyinka aan helno marka aan heleyno nadiifiye waxaan leenahay:
Cab biyo saafi ah. Tani waxay si gaar ah muhiim ugu tahay magaalooyinka aan tayada biyuhu aad u fiicnayn. Si loo hubiyo inaan marwalba cabno biyo saafi ah, waa inaan hubinnaa miirayaasha waqti ka waqti oo aan u badalnaa si joogto ah. Haddii tan waqtiga lagu qaban waayo, gumeysiga ayaa la keydin doonaa.
Waxay yareysaa halista cudurka. Markaanad ku cabbi weyno biyo jeermis iyo noole kale, waxaan yareyneynaa suuragalnimada inaan ku xanuunsano biyo la cabbo xaalad liidata.
Haweenka uurka leh iyo carruurta waxay cabi doonaan caafimaad. Marxalada uurka iyo markaan yaraynayno waa muhiim inaan sifiican uga taxadaro waxaan cuno. Jidhkeennu sidaa uma fiicna in laga takhaluso bakteeriyada waxyeellada leh ee jirka, markaa waa inaad siisaa caawimaaddaas yar.
Waxay u rakibaan si fudud. Ilaa aynaan u baahnayn biyo sifeeye ballaaran oo guriga oo dhan ah, miirayaasha guud ayaa ka fudud in la rakibo. Iyagu uma baahna dayactir badan sidoo kale, marka laga reebo beddelka shaandhada mar kasta oo badanaa.
Waxaad badbaadinaysaa lacag iyo dadaal. Waqtiga dhexe iyo muddada dheer, waa mid aad u habboon oo dhaqaale leh maadaama ay ka jaban tahay dhammeynta iibsashada biyaha dhalada ku jira. Waa inaad sameysid maalgashi bilow ah, laakiin mustaqbalka fog waad keydin doontaa, maadaama biyaha dhalada kujira ay qaali yihiin.
Waxay hagaajinaysaa dhadhanka biyaha. Biyahaas dhadhanka xun, miirahaani wuxuu ka saarayaa dhadhankaas.
Caawinta deegaanka. Haddii aad isticmaasho miirayaashaan oo aad iska ilaaliso biyaha dhalada ku jira, waxaan yareyneynaa qiiqa caagga ah ee ay hawada ku sii daayaan (eeg Dib-u-warshadaynta dhalooyinka caagga ah).
Waxaad dooran kartaa sifaynta adiga kuu fiican. Waxaa jira noocyo kala geddisan oo mid kastaaba uu ku habboonaado ama uga sii darto baahida loo qabo.
Khasaaraha ugu weyn
In kasta oo biyo-sifeeyahaani uu yahay ikhtiyaar weyn oo lagu cabi karo biyo xaaladoodu wanaagsan tahay oo faa'iidooyinkiisu ka badan yihiin qasaaraha, waxaan u magacaabi doonnaa inay noqdaan kuwo hufan wax kasta oo aan haysanno.
Waa in lagu hayaa xaalad wanaagsan. Miirayaashaani waxay hayaan bakteeriyada iyo noolaha si ay uga hortagaan inuu biyaha dhex maro. Tani waa sababta ka dhigaysa iyaga inay u baahan yihiin in la beddelo waqti ka waqti si looga hortago inaan mar kale cunno biyo wasakhaysan. Haddii dayactirka aan si sax ah loo sameyn, waxaan sababi doonnaa jiritaanka maraq nafaqo leh oo qumman oo bakteeriyadu ku faafto biyaheenna. Haddii aadan nadiifin, waxaad ku ururin kartaa ilaa 2.000 nooc oo bakteeriya ah oo ka badan biyaha aan la sifeyn.
Kharashka bilowga ah. Sifeeyaha biyaha wuxuu u baahan yahay maalgashi bilow ah si loo rakibo. In kasta oo cillad-darradan si fudud loo hagaajinayo markaan aragno in iskucelceliska qiimaha qoysaska biyaha dhalada ku jira uu yahay 500 euro sanadkii.
Waxaa jira nidaamyo daahirinta qaar ka mid ah in aad ayey u adag yihiin iyo inbadan oo loobaahanyahay in labadalo miiraha dhowr jeer sanadkii. Waxaa ugu wanaagsan in la rakibo mid u baahan in la beddelo oo keliya sanadkiiba mar.
Dayactirka iyo rakibida sifeeyaha biyaha
Sidaan aragnay, isticmaalka saxda ah ee miirayaashaan ayaa lagama maarmaan u ah sida biyaha la cabbo oo xaalad wanaagsan ku jira. Sidaa darteed, waxaan kuu sheegeynaa baahiyaha ugu muhiimsan ee dayactirka nadiifiyayaashan.
Dayactirka ugu weyn waxay ku soo gashaa inay beddesho kaydadka markii loo baahdo. Si tan loo sameeyo, waa inaad raacdaa tilmaamaha soo-saaraha, in kastoo ay macquul tahay inay ku xiran tahay isticmaalka aan siinayno, waa inaan si isdaba-joog ah u beddelnaa. Dayactirkani waa mid yar marka la barbar dhigo dhammaan faa'iidooyinka uu qalabkani na siinayo.
Si loo rakibo waxaan kaliya u baahanahay inaan gooyo socodka biyaha oo aan furno qasabadaha si aan ugu harno biyaha haraaga ah. Markaa waxaan ku xidhi doonaa adabtarada tubbada iyo weelka wax lagu nadiifiyo. Weelka ayaa lagu dhejin karaa oo loo dejin karaa siyaabo kala duwan. Nidaamyadan waa in lagu dhejiyaa oo la isticmaalaa, sidaa darteed uma baahnaan doonno caawimaadda tuubiste kasta.
Waxaan rajeynayaa in tilmaamahan aad ku isticmaali karto biyo sifeeyaha guriga oo aad ka faa'iideysan karto dhammaan faa'iidooyinkiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Kaydinta tamarta » Dhaqaalaha Guriga » Sifeeyaha biyaha
Waad salaaman tahay, waxaan hayaa shaandhada biyaha ee 5-ka ah. Dayactirku maahan heshiis weyn, miirayaasha ayaa loo baahan yahay in la beddelo sanadkiiba hal mar iyo xuubka 2dii sanaba mar. 4ka miiraha ayaa ku kacaya around 14 ilaa € 16. Sifeeyaha ayaa igu kacay € 145, in kasta oo ay sidoo kale jiraan € 90, farqiga u dhexeeyaa waa tayada qalabka iyo xoojinta tuubbooyinka, laakiin biyuhu sidoo kale way soo baxayaan. Intaa waxaa dheer, waxaa lagugula talinayaa inaad iibsato falanqeeye biyo si aad u aragto PPM (waxay ku kacaysaa qiyaastii € 19), qiimaha waa inuu noqdaa ilaa 10ppm.
Isla marka keydku sax yahay. Celcelis ahaan qoysku waxay qarash gareyn karaan 8ug dhalo 1 ama 2 maalmood kasta. Taas macnaheedu waa € 1,45 (8L Fonteide) * 365 maalmood = € 529 / sanadkii + wasakhda caagaga markasta oo aan iska tuurayno dhalo… ..
Waxaan inta badan u iibsaday si aan uga sii fogaado faddarayn badan, laakiin sidoo kale waa run inay bixiso nolol tayo leh.
Jawaab Haaruun Miski
Jarmal Portillo dijo
Aad baad ugu mahadsantahay inaad nooga sheekayso khibradaada Aarón, waxay hubaal tahay inay ka caawinayso dad badan inay siiyaan dhiirigelin ay ugu baahan yihiin inay ka bilaabaan adduunka sifaynta biyaha.
Jawaab Germán Portillo
Waad salaaman tahay, waa su'aal. Goorma ayaa la daabacay maqaalkan?
Nalka iftiinka dhaliya iyo tikniyoolajiyaddiisa cusub
Dib u isticmaal dhalooyinka caaga ah